ကော်လံမော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
16 / 09 / 2021 16 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 42 Views စာ0မှတ်ချက် 21314 TRON: အမွေ, 21321 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာကာသစခန်း, 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ, ၂၁၃၂၃ Grand Piano, ၂၁၃၂၆ Winnie the Pooh, 21327 လက်နှိပ်စက်, ၂၁၃၂၈ Seinfeld, ၂၁၃၂၉ Fender Stratocaster, 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော, ကြောကျတိုငျ, Guillaume Roussel, အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်း, Ideas, Lego, Lego Ideas, Lego Ideas ပြိုင်ပွဲ, Lego Ideas စီမံကိန်းများ, မော်နီကာ Pedersen, မော်တော်မီးပြတိုက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားမှဂီတ, သဘော, စန်ဒရို Quattrini, E သည်artဇကမ္ဘာလုံး, အဆိုပါ LEGO Group, Truman Cheng ပါ, Vincent van Gogh: ကြယ်ကြယ်
27 / 08 / 2021 27 / 08 / 2021 မင်းသမီး Emma Kennedy 155 Views စာ 1 မှတ်ချက် 10255 ညီလာခံရင်ပြင်, ၁၀၂၆၀ Downtown Diner, 21327 လက်နှိပ်စက်, 70840 Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါတယ်!, ၇၅၃၀၈ R75308-D2, ကြောကျတိုငျ, မင်းသမီး Emma Kennedy, Ideas, Lego, Lego Ideas, Lego Star Wars, Lego Technic, သဘော, အုတ်တွေနဲ့အနားယူပါ, Star Wars, နည်းပညာ, အဆိုပါ LEGO Group, The Lego ရုပ်ရှင် 2, တိုက်တန်းနစ်, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး, YouTube ကို
အိုးမရှိ၊ LEGO အုတ်များတောင်မှမိုက်မဲစွာစျေးကြီးသည်
20 / 08 / 2021 20 / 08 / 2021 မင်းသမီး Emma Kennedy 212 Views စာ0မှတ်ချက် 10179 ထောင်စုနှစ် Falcon, 71755 အဆုံးမဲ့ပင်လယ်၏ဘုရားကျောင်း, Boba fett, ကို C-3PO, ကြောကျတိုငျ, မင်းသမီး Emma Kennedy, Lego, Lego Ninjago, Lego Star Wars, Ninjago, သဘော, အုတ်တွေနဲ့အနားယူပါ, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group
စာရေးသူနှင့်ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ Emma Kennedy သည် LEGO အုတ်များတောင်မှစျေးကွက်ထဲတွင်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်များပြားသောငွေများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
LEGO stop-motion ရုပ်ရှင်များကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ
06 / 08 / 2021 07 / 08 / 2021 မင်းသမီး Emma Kennedy 258 Views စာ0မှတ်ချက် 10255 ညီလာခံရင်ပြင်, 10264 ထောင့်ဂိုဒေါင်, 10278 ရဲစခန်း, ၇၅၂၉၀ Mos Eisley Cantina, ဆောင်အပျိုရံ, ကြောကျတိုငျ, Creator Expert, မင်းသမီး Emma Kennedy, Lego, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Star Wars, Obi-wan kenobi, သဘော, ရေနံချောင်း, အုတ်တွေနဲ့အနားယူပါ, Star Wars, Star Warsမျှော်လင့်ချက်အသစ်, မလှုပ်နဲ့, YouTube ကို
စာရေးသူ၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးသူနှင့် LEGO YouTuber Emma Kennedy သည် LEGO ရပ်တန့်ထားသောရုပ်ရှင်များဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားသင်တန်းတစ်ခုပေးသည်။ တခါတရံမှာငါကဲ့သို့
ဟေ့ Lego, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဘို့အ Captain America နှင့်အတူကအအေး?
27 / 07 / 2021 27 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 502 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Agatha Harkness, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ကြောကျတိုငျ, Disney+, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Loki, Marvel, သဘော, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်
အဆိုပါအပေါ်အခြေခံပြီးပထမ ဦး ဆုံးအစဉ်အဆက် LEGO Collectible Minifigures စီးရီး Marvel Cinematic Universe သည်နောက်ဆုံး၌ဤနေရာတွင်ရှိသည်
ရိုးသားကြပါစို့။ LEGO တည်ဆောက်ရန်အချိန်ကိုရှာရန်မလွယ်ကူပါ
23 / 07 / 2021 23 / 07 / 2021 မင်းသမီး Emma Kennedy 406 Views စာ0မှတ်ချက် 10185 အစိမ်းရောင်ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်တ, 10190 Market ကလမ်း, 10264 ထောင့်ဂိုဒေါင်, 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, ကြောကျတိုငျ, Creator Expert, မင်းသမီး Emma Kennedy, Lego, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Star Wars, Lego YouTube, modular အဆောက်အ ဦး စုဆောင်းခြင်း, သဘော, အုတ်တွေနဲ့အနားယူပါ, Star Wars, YouTube ကို
စာရေးဆရာနှင့်ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ Emma Kennedy သည်သူမ YouTube channel အတွက် LEGO ကိုမည်သို့တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သူမအတွက်မည်ကဲ့သို့တည်ဆောက်သည်ကိုသူမရှင်းပြသည်။ ငါ
LEGO ပရိသတ်များအားပြောဆိုခြင်းသည် YouTube ပရိသတ်ကိုတည်ဆောက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်
16 / 07 / 2021 17 / 07 / 2021 မင်းသမီး Emma Kennedy 304 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၀၂၇၄ Ghostbusters ECTO-10274, 21327 လက်နှိပ်စက်, 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်, 70828 Pop-Up ကို Party ဘတ်စ်ကား, ၇၅၃၀၈ R75308-D2, 75550 Minions ကွန်ဖူတိုက်ပွဲ, ၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet, ကြောကျတိုငျ, Creator 3-in-1, Creator Expert, မင်းသမီး Emma Kennedy, Ideas, Lego, Lego Creator 3-in-1, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Ideas, Lego မှ marvel, Lego Minions, Lego Star Wars, Marvel, Minions, သဘော, အုတ်တွေနဲ့အနားယူပါ, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group, The Lego ရုပ်ရှင် 2, The Lego ရုပ်ရှင် ၂: ဒုတိယအချက်art, YouTube ကို
စာရေးသူနှင့်ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ Emma Kennedy ကသင်၏ LEGO YouTube ရုပ်သံလိုင်းတွင်ကြည့်ရှုသူများအားပြောဆိုခွင့်ပေးခြင်းသည်တည်ဆောက်ရန်မည်သို့ကူညီနိုင်သည်ကိုရှင်းပြသည်
Lego Ideas 21327 လက်နှိပ်စက်သည် AFOLs နှင့်အခြားလူများအကြားခြားနားချက်ကိုပြသသည်
09 / 07 / 2021 09 / 07 / 2021 မင်းသမီး Emma Kennedy 274 Views စာ0မှတ်ချက် 21327 လက်နှိပ်စက်, ကြောကျတိုငျ, မင်းသမီး Emma Kennedy, Ideas, ဂျိမ်းမေ, Lego, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego Ideas, သဘော, အုတ်တွေနဲ့အနားယူပါ, စတိဗ်ဂင်းနစ်စ်, YouTube ကို
စာရေးသူနှင့်ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ Emma Kennedy သည် LEGO ကိုမည်သို့ဖော်ပြသည်ကိုဖော်ပြသည် Ideas 21327 လက်နှိပ်စက်ရိုက်တာဟာသူဖြစ်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်စေတယ်
သီးသန့်အာရုံစိုက် LEGO သည် BrickLink Designer Program ၏မှားယွင်းသောချဉ်းကပ်နည်းဖြစ်သည်
08 / 07 / 2021 08 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 228 Views စာ0မှတ်ချက် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, ၇၅၂၉၄ Bespin Duel, ၇၇၉၀၆ Wonder Woman, 80107 နွေ ဦး Lantern ပွဲတော်, 910001 သစ်တောအတွင်းရှိရဲတိုက်, ၉၁၀၀၁၇ Kakapo, AFOL ဒီဇိုင်နာအစီအစဉ်, အုတ်ခဲ, ကြောကျတိုငျ, ရုပ်ပြ-Con, ပေမယ့, ကာကပို, Lego, Lego Star Wars, သဘော, San Diego မှရုပ်ပြ -con, Star Wars, သစ်တောအတွင်းရှိရဲတိုက်
ပတ်ပတ်လည်အသုံးအနှုန်း LEGO GroupBrickLink Designer Program ၏အဆိုအရ၎င်းသည်သီးသန့် ဦး စားပေးမှုကို ဦး စားပေးသည် - ၎င်းသည်လုံးဝမှားယွင်းသောချဉ်းကပ်မှုဖြစ်သည်